Injabulo kuvulwa iholo likanokusho
Injabulo ibibhalwe ebusweni emphakathini waseHlokozi kwa ward 7 obuhlangene eHholo lomphakathi likanokusho elisha ceke ebelivulwa ngokusemthethweni uMeya kaMasipala waseMzumbe uCllr S.T Gumede kanye namakhansela.
Indlela umphakathi obuphume ngobuningi bawo ukuzothamnela lo mcimbi bekubonakala ukuthi abantu baseMzumbe bayilambele intuthuko emakhaya. Umphakathi uncome igalelo lomkhandlu nokuzinikela kwawo ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya. “Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga siyoke sibe neHholo elisezingeni eliphezulu njengaleli esilivula namhlanje, futhi elinezindlu zangasese ezisezingeni eliphezulu,” kuncoma uGogo wendawo uMaCele.”
UKhansela uGumede ikhumbuze umphakathi ngokubaluleka kokuvota futhi uvotela uhulumeni osebenzayo. Kuke kwaba nomzuzu womunyu lapho iMeya ikhumbuza umphakathi ngendlela abantu abamnyama ababephethwe ngayo uhulumeni wobandlululo phambilini. “Indoda yayiphoqeleka ukuba iyosebenza emakhishini abamhlophe, ibizwa ngawo wonke amagama ahlisa isithunzi koda yayingekho into ababengayenza, kubeka IMeya ngokukhathazeka.” UMeya uqhube wathi, “Mphakathi waseHlokozi niyalibona ukuthi lihle kanjani? Sifuna ukuthi noma sesibuya emva kwezinyanga ezintathu sibuye lilihle kanje lingalimele,” kusho uMeya. Iqhube yathi kunezimali ezishisiwe esisichithayo siwumkhandlu silungisa izakhiwo zikaHulumeni, “Leyo mali ngabe isebenza ukwakha ezinye izakhiwo ezintsha.” UGumede uthe ukuvikeleka kwalelihholo kuwumsebenzi osemahlombe wawowonke umphakathi waseHlokozi.
Umcimbi ube usuvalwa ngenhlokomo kutheleka umculi wodumo uPhuzekhemisi ofike waqhulula amanoni akhe kwachwaza indlu yonke abantu bevukwa uhlevane.